Plone को कहिले सुन्नुभयो? छ फिट अप? | Martech Zone
माइकलले मेमा ब्लगमा पोस्ट गरे, जब उनले भ्रमण गरे सीएमएस एक्सपो, त्यो प्लोन त्यहाँ एक ट्र्याक थियो। प्लोन? के हो प्लोन? मैले भर्खर पत्ता लगाए ...
प्लोन पनि यसमा रहेको छ शीर्ष 2% सबै खुला स्रोत परियोजनाहरू विश्वव्यापी रूपमा २०० कोर विकासकर्ताहरू र than० भन्दा बढी०० समाधान प्रदायकहरू countries 57 देशहरूमा। परियोजना सक्रिय रूपमा विकसित गरिएको छ 2001 देखिमा उपलब्ध छ more० भन्दा बढी भाषाहरू, र छ उत्तम सुरक्षा ट्र्याक रेकर्ड कुनै पनि प्रमुख CMS को। यो प्लोन फाउन्डेशनको स्वामित्वमा छ, 501०१ (c) ()) गैर-नाफामुखी संस्था होइन, र सबै प्रमुख अपरेटिंग प्रणालीहरूको लागि उपलब्ध छ।
Plone एक अविश्वसनीय शक्तिशाली सामग्री प्रबंधन प्रणाली हो। सबै विशिष्ट सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली सुविधाहरू बाहेक, त्यहाँ केहि पनि छन् जुन वास्तवमै बाहिर उभिएका थिए:
विशाल स्केलेबिलिटी - Plone कार्यान्वयनको लागि सयौं हजारौं वा लाखौं पृष्ठहरू छन् यो असामान्य छैन। यो धेरै जसो सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीहरूमा अप्रबन्धित हो।
अनुकुल अनुमार्गण र अनुमोदन - सबै भन्दा जटिल मार्ग, सम्पादन र स्वीकृति प्रक्रियाहरू सजीलै लागू गर्न सकिन्छ। उद्यम ग्राहकहरूको लागि यो अत्यन्त शक्तिशाली छ।
गति र सरलता - Plone सेवा पृष्ठहरूमा अविश्वसनीय छिटो छ र इन्टरफेस औसत उपयोगकर्ता को लागी एकदम सरल र प्रयोग योग्य छ।
धेरै खुला स्रोत परियोजनाहरू जस्तै, Plone विकासकर्ताहरूको आफ्नो अविश्वसनीय समुदाय र डाउनलोड-डाउनलोड गर्न को लागी डाउनलोड छैन। त्यहाँ लगभग छन् ,4,000,००० एड-अनहरू तपाईंको स्थापनाको कार्यक्षमता विस्तार गर्न अनलाइन भण्डारमा उपलब्ध छ - ब्लगिging, म्यापि,, वर्कफ्लोज, मिडिया स्ट्रिमि and र सामाजिक उपकरणहरू सहित।
जब म ब्लग पोष्टहरू लेख्छु, त्यहाँ सँधै कुनै प्रकारको इन्डियाना जडान देखिन्छ। Plone फरक छैन। Calvin Hendryx-Parker को एक बोर्ड सदस्य हो Plone फाउंडेशन र यहाँ फोर्टविले, इन्डियाना मा छ। क्याल्भिनकी श्रीमती गेब्रिएल हेन्ड्रिक्स-पार्करले स्यान फ्रान्सिस्कोमा १ 1999 XNUMX। मा 'सिक्स फिट अप' नामक फर्म स्थापना गरे र उनीहरू यहाँ इन्डियानामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श फर्ममा बसाई सरे। गेब्रिएल मार्केटिंग र नेतृत्व मा एक एमबीए हो EM लियोन, फ्रान्स बाट।
मैले भ्रमण गरे छ फिट माथि पछिल्लो महिना र प्रभावित थियो। शहरको फोर्टभिलमा तिनीहरूको नवनिर्मित कार्यालय ठाउँ एक आश्चर्यजनक स्थान हो। तिनीहरूसँग ब्याकअप जेनरेटरहरू र फाइबर स्थापनाको साथ तिनीहरूको ग्राहकहरूको कोर स्थापनाहरूको साथ तिनीहरूको आफ्नै मिनी-डाटा केन्द्र पनि छ लाइफलाइन डाटा केन्द्रहरू। उनीहरूले होस्टिंग, कस्टम विकास, एकीकरण सेवाहरू प्रदान गर्छन्, र लाइफ साइन्सेस, उच्च शिक्षा तथा विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक अन्य उद्योगहरूमा कम्पनीहरूका लागि प्लोन स्थापना गर्दछन्।
छ फीट अप माथि भर्खरै अनावरण गरिएको सोलरीइन्डेक्स १.०, प्लन / जोपका लागि उत्पाद जसले लाभ उठाएर उन्नत खोजी क्षमताहरू प्रदान गर्दछ। सोलरअपाचे लुसेन परियोजनाबाट लोकप्रिय खुला स्रोत ईन्टरप्राइज खोज प्लेटफर्म। SolrIndex तेज र तेज मापन योग्यता खोजी क्षमताको साथ आउँदछ। SolrIndex डिजाइन द्वारा एक्स्टेन्सिबल छ, जसको मतलब यो अन्य अनुक्रमणिका र क्याटलगको साथ एकीकृत गर्न क्षमता छ। यो साइटहरूको लागि राम्रो समाचार हो जुन बहु रिपोजिटरीहरू मार्फत खोजी क्षमताहरू प्रदान गर्न आवश्यक पर्दछ।
छ फीट अपमा अब २० भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन् र सुरू भएकोले वर्ष-ओभर-बर्ष एक रेकर्ड डबल-अंक वृद्धि जारी राखेको छ। यो विशेषज्ञता र उनीहरूलाई आफ्नो ग्राहकहरु लाई समर्थन समर्थन गर्न एक श्रद्धांजलि हो। सिक्स फिट अपले प्लोन ट्यून-अप दिनको प्रशासन गर्दछ ... मासिक, दिनभर, आभासी घटना प्लन समुदायलाई मद्दतको लागि।
टैग: ब्लगिंगCMSसामग्री व्यवस्थापन प्रणालीसामग्री प्रबन्धन प्रणालीठूलो सेमीम्यापिङमिडिया स्ट्रिमि।ploneछ फिट माथिकार्यप्रवाह
स्वायत्तता, निपुणता र उद्देश्यको साथ पुरस्कृत गर्नुहोस्